ExTiX 17.5 ikozvino inokutendera iwe kuti ugadzire chero kugovera kunoenderana neUbuntu 17.10 | Linux Vakapindwa muropa
Arné Exton, musiki uye musimudziri wekuparadzira ExTiX, akataura kuti vhezheni yazvino yekuparadzira iyi inokutendera kuti iwe ugadzire kumwe kugovera nekuda kwemidziyo yayo. Izvi zvakagadzirwa kugoverwa zvinogona kunge zvichibva paUbuntu 17.04 kana Ubuntu 17.10. Ehe, ramangwana vhezheni yeUbuntu iyo ichiri mukuvandudza.
Ehe, iko kugoverwa uko Isu tinotenda zvichibva paUbuntu 17.10, ivo vanozove kusagadzikana kusagovaniswa uye tichiri pasi pekuchinja kwakawanda kunogona kutsamwisa iko kushandisa kwechinguva zvishandiso, kunyangwe isu tichigona kugara tichishandisa chaiwo michina kuyedza.
Refracta-Zvishandiso kubva kuExpTXX 17.5 ichatibvumidza kuti tigadzire zvinogoverwa zvichibva paUbuntu 17.10 uye 17.04
ExTiX 17.05 iko kugovera kunobva paUbuntu uye kune iyo Refracta-Zvishandiso maturusi, zvishandiso izvi ndizvo zvichatibvumidza nenzira iri nyore kugadzira kugovera kunoenderana neUbuntu. Izvi Refracta Zvishandiso zvine wizard inobatsira mune ese nhanho uye inoita kuti zvive nyore kugadzira uye kugadzirisa Ubuntu-based goverwa. Nekudaro, kuti tiite izvi tinoda komputa ine simba rakawanda uye yakawanda yegondohwe ndangariro, inokwana kurodha ubuntu live-CD uye kuti kugoverwa kwedu kweEexTiX kunogona kushanda. ExTiX inouya neUbuntu, KDE Plasma, uye KDE Mapurani.
Kugadzira mufananidzo kana kugovera zvichibva paUbuntu, isu tinongofanira kuenda ku KDE Menyu -> Sisitimu -> Gadzira LiveCD. Mushure meizvi, iyo wizard ichatanga uye maitiro acho achatora ingangoita maminetsi gumi, hongu kana isu tine timu ine zviwanikwa zvakawanda, kana zvisiri, nguva ichawedzera zvakanyanya.
ExTiX 17.5 chishandiso chikuru chekugadzira kugovera kana kuti kutanga munyika yekusimudzira nekusika kwekugovera, asi izvo zvakasikwa hazvisi chimwe chinhu kunze kwekugadzirisa kweUbuntu, chimwe chinhu chiri kure nekupararira kwechokwadi senge Debian, LinuxMint kana Arch Linux. Asi zvichiri kunakidza kudzidza zvishoma nezvishoma kugadzira kugovera Haufungi here?
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » GNU/Linux » Kugoverwa » ExTiX 17.5 ikozvino inokutendera iwe kuti ugadzire chero kugovera kunoenderana neUbuntu 17.10